Service - Ningbo Sine andriamby Co., Ltd
Customer fanompoana miompana hampitombo ny lanjan'ny vokatra!
Service no fototry ny Sine ny fampandrosoana. Ny foto-kevitra mijoro varotra miaraka amin'ny mpanjifa na inona na inona ny zava-misy. Dia hitsara ny fampisehoana ny fomba tsara fahafaham-po ny mpanjifa no 'zavatra ilaina sy ny ho tarihin' ny finoana fa ny mpanjifa no farany hamaritana ny fomba fahombiazana isika dia ho.
Taorian'ny varotra service:
Sales dia ny mampahafantatra ny mpanjifa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fiterahana;
Sales hitandrina ny fanadihadiana ny mpanjifa afa-po-potoana, fandinihana sy mamintina mpanjifa fepetra sy ny tsena mety fitakiana;
Voalohany dia ny Sales hanao tsikera ho any amin'ny Sampan-draharahan'ny Quality tsoratra mandray mpanjifa indray mandeha 'fitarainana momba ny vokatra. Ary Quality Sampan-draharahan'ny hanao fanadihadiana, ento asa fanitsiana, mamantatra sy kery fampiharana vokany ary farany mampahafantatra ny vokatra ho an'ny Sales. Sales dia haniraka ny mifandray ireo antontan-taratasy sy ny fandalinana ny mpividy mba hahazo fahafaham-po ny fandraisana ho mpikambana,
Afaka manome isan-karazany fitaterana: By Air, an-dranomasina, TNT / DHL / UPS / Fedex Express sns
Injeniera famolavolana sy ny vahaolana ara-teknika:
Manana fahaizana matanjaka amin'ny vahaolana teknika indrindra ao Engineering and Design. Isika nanaovany manolo-tena sy ny asa fampandrosoana sy ny fanatsarana mitohy. Ny injeniera mpiasa manana traikefa bebe kokoa taona amin'ny andriamby orinasa mpamokatra entana, fizahan-toetra, kalitao fanomezan-toky.